Arsenal oo garoonka Emirates guul dirqi ah kaga gaartay kooxda West Ham… +SAWIRRO – Gool FM
(London) 19 Sebt 2020. Arsenal ayaa garoonka Emirates guul dirqi ah kaga gaartay kooxda West Ham, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca labaad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbadhac 1-1 ay isku dhaafi waayeen labada kooxood.
Daqiiqadii 25-aad kooxda Arsenal ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay Alexandre Lacazette, kaddib markii uu caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Pierre-Emerick Aubameyang.
Laakiin daqiiqadii 45-aad West Ham United ayaa heshay goolka barbardhaca, waxaana 1-1 ka dhigay Michail Antonio, iyadoo caawinta goolkan uu lahaa Ryan Fredericks.
Daqiiqadii 85-aad Arsenal ayaa markale hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 2-1 ka dhigay dheesha Edward Nketiah, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Daniel Ceballos.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-1 oo ay Arsenal kaga adkaatay kooxda West Ham United oo marti ugu aheyd garoonka Emirates, Gunners ayaana kulankeedii labaad guul ka gaartay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan ee 2020-21.
Horudhac: Real Madrid vs Real Sociedad… (Los Blancos oo caawa bilaabaysa difaacashadeeda horyaalka La Liga kal ciyaareedkan)